Tartanka Sheeg ama Sawir ee sheeko curinta, iyo farshaxan – Somali Jobs Inc Tartanka Sheeg ama Sawir ee sheeko curinta, iyo farshaxan – Somali Jobs Inc
Tartanka Sheeg ama Sawir ee sheeko curinta, iyo farshaxan
Baratankii 1aad 2019
Bandhiggu waa tartan halabuur oo u kala baxa labadan qaybood
Sheeko Curinta (Short story writing competition)
Farshaxanka (Art work production competition)
Wasaaradda Shaqo-galinta, Arrimaha Bulshada iyo Qoyska, iyo Komishanka Qaranka Xuquuqal Isaanka Somaliland, waxa ay sannad kasta 25 Noofambar ilaa 10 Diisambar xusaan, una ololeeyaan cidhibtirka tacaddiyada ku salaysan jinsiga, si looga hortago, loo yareeyo, loo maareeyo, isla markaasna meesha looga saari lahaa dhammaan tacaddiyada ka dhanka ah jinsiga iyo waxyaabaha sababa in tacaddiyo dhacaan. Sannadkan 2019ka, Wasaaradda iyo Komishanku waxa ay go’aansadeen in si ka duwan sidii loo xusi jirey sannadihii hore loo galo ololaha ka dhanka ah tacaddiyada.
Waxa la isla gartay in muhiimad ballaadhan la siiyo qoraalka iyo fanka guud ahaan, isla markaasna la dhiirrigeliyo hablaha da’da yar ee jecel, isla jeerkaasna ku hawlan horumarinta fanka iyo qoraalka sida hal-abuurka farshaxanka iyo sheekooyinka. Wasaaradda iyo Komishanku waxay daruuri u arkeen in qoraalka iyo farashaxanku qayb ka noqdaan wacyigalinta iyo olalaha lagaga soo horjeedo tacaddiyada ka dhanka ah dumarka iyo hablaha, guud ahaanna dadka u nugul, sababo kala duwan awgood.
Waxay Wasaaradda iyo Komishanku si wadajir ah u shaacinayaan in ay furan tahay qabashada araajida codsiga tartanka curinta sheeko gaaban ama halabuur farshaxan, oo xambaarsan farriin ku wajahan tacaddiyada ka dhanka ah jinsiga ee ka dhaca deegaannada Somaliland guud ahaan. Gaar ahaan, tartanku waxa uu si gaar ah diiradda u saari doonaa kufsiga iyo xaaladaha ku gadaaman, dhinaca dhaqanka, saamaynta nafsi iyo tu caafimaadka ay doonto ha ahaatee.
Tartamayaasha waxa u furan oo kaliya in ay la yimaaddaan midkood 1)sheeko gaaban, ama 2) farshaxan gudbinaya wax la xidhiidha kufsiga, ama saamaynta iyo sababta kufsi ku dhici karo. Qofkiiba waxa uu ku tartami karaa, hal sheeko ama hal farshaxan oo kaliya.
Lama aqbali doono qofka la yimaadda wax ka duwan intaas.Tusaale ahaan, qof kali ahi kuma tartami karo hal sheeko iyo hal farshaxan, waxa u furan qofka oo kali ah in uu qaato hal nooc oo kaliya, (sheeko ama farshaxan).
Waxa laga rabaa qofku marka uu sheekada u soo diro emailka xusan in uu la wadaago bulshada isagoo isticmaalaya FACEBOOK & Barraha bulshada ee kale.
Wacyigalinta iyo ololaha ka dhanka ah tacaddiyadu in ay gaadhaan dhammaan qaybaha bulshada, iyadaoo la isticmaalayo habab kala duwan, oo cilmiyaysan.
In dareenka hablaha ku foogan qoraalka iyo farshaxannimada lagu soo jeediyo tacaddiyada, si loo beddelo fekerka guud ee bulshada.
In la dhiirri galiyo hablaha jecel in ay horumariyaan xirfadda qoraalka iyo farshaxanimada.
In kayd iyo tixraac loo sameeyo wacyigalinta lagula tacaalaayo tacaddiyada ku salaysan jinsiga.
Hagaha tartanka Sheeg ama Sawir:
Waxa hagi doona tartanka Sheeg ama Sawir qodobadan hoosku taxan, fadlan si dhammaystiran u raac tartame:
Waxa lagu tartami karaa: 1) hal sheeko oo gaaban, inta u dhaxaysa 18,000 ilaa 30,000 oo eray (one short story) ama, 2) hal farshaxan oo leh tayada ugu sarraysa marka loo eego tartamayaasha kale (one art work exhibition)
Tartamuhu waxa uu wax ka qori karaa oo kali ah, ama soo bandhigi karaa‘Kufsiga’wax ku saabsan, isaga oo isticmaalaya sheeko gaaban ama bandhig farshaxannimo.
Tartanku waxa uu u furan yahay hablaha oo kaliya.
Da’da tartamuhu waa in ayna ka weynaan 26 jir.
Tartamuhu waa in uu yahay gabadh ku soo bandhigi karta farriin kadhan ah tacaddiyada ku salaysa jinsiga, gaar ahaan kufsiga.
Tartankani waxa uu dhiirrigalin gaar u yahay gabdhaha ka hooseeyada’da 26 jir ee jecel qoraalka iyo farshaxanka
Baratankani waxa uu qayb ka yahay farriin xanbaarayaasha olalaha sannadkan ee ka dhanka ah kufsiga, sidaa, darteed waa in farriintu noqotaa mid ku dhisan mabaa’dii sare, oo leh asal iyo feker qoto-dheer.
Tartamaha waxa laga rabaa in uu soo gudbiyo, warbixin ay ku taxan yihiin wax yaabahan hoos ku qoran:
Magaca tartamaha oo dhammaystiran.
Magaca hooyada tartamaha oo dhammaystiran.
Da’da iyo goobta dhalashada tartamaha.
Waxa uu tartanka kaga qayb galaaayo (sheeko ama farshaxan).
Saxeexa kalsoonida tartanka iyo natiijadiisaba.
Magaca sheekada ama farshaxanka ee tartamaysa.
Caddaynta lahaanshaha sheekada ama farsaxanka tartamaya.
Habka codsiga ka qayb galkatartanka.
Tartanka waxaa masuul ka noqon doona guddi dhan 5 xubnood oo ugu yaraan boqolkiiba 60% dumar yihiin, islamarkaasna, khibrad iyo waayo-aragnimo u leh dabeecadda tartanka noocan oo
Araajida la soo gudbinaayo oo dhan waxaa hagoog looga dhiyaa xogta shakhsiga ah.
Tartamuhu waxa uu gacanta ku soo gudbinayaa sheekada ama farshaxanka tartanka ka qaybgalaya oo daabacan ama shaxan ah, iyada oo lagu soo hagaajinaayo ciwaannada hoos ku qoran.
Farshaxanka waa in ay la socotaa warqad kooban oo sharaxaysa farshaxanka.
Qofku waa in uu sibuuxda u caddeeyaa in uu asal ahaan leeyahay waxa tartanka uu kaga qaybgalayo, islamarkaasna aan hore loo daabicin ama loo soo bandhigin.
Tartamuhu waa in uu soo gudbiyaa waxa uu ku tartamaayo ugu dambayn 30 ka bisha Noofambar, sannadka 2019ka, 12 habeennimo, haddii u ka dibdhaco qoraalku ama farshaxanku tartanka ka qaygelimayaan, wax tixgalin ahna la siinmaaayo.
Xidhiidh ka baxsan nidaamka tartanka oo dhexmara tartamaha iyo guddiga u xilsaaran tartanka lama ogola, qofkii ku kacana, tartanka wuu ka hadhayaa.
Guddida qiimaynta ayaa la iman doonta qorshaha rasmiga ah ee lagu kala saaridoono tartamayaasha, oo faahfaahsan.
Waxa lagu soo hagaajinayaa sheekada iyo farshaxanka xafiiska qoyska ee wasaaradda Shaqo galinta, Arrimaha Bulshada iyo Qoyska, iyadoo loo soo diray emailka: gender@slmesaf.com ugu dambeyn 04 December 2019– wixii faahfaahin ah, kala xidhiidh telefonnadan
1. Luul Aden Geeddi-0634460607
Abdillahi Bile – 0634437434
Wareegyada iyo habka kala saarista tartamayaasha.
Waxa jiri doona labo wareeg, ka koowaad waa soo dhajinta liiska u soo gudbay wareegga labaad ,oo noqon doona saddexda ugu tayada wanaagsan sheekooyinka iyo farshaxannada la soo gudbiyay xilligii loogu talo galay, sidaasna saddex qof ayaa isugu soo hadhi doona wareegga labaad.
Guulaystaha kowaad, labaad iyo ka saddexaad ayaa isugu soo hadhi doona wareegga labaad, waxa lagu salayn doonaa u wareegga wajiga labaad ee tartanka, farshaxannimada, qoto-dheerida fekerka, gudbin ogaanta, iyo hal’abuurnimada iyada oo la raacaayo xeerarka xidhiidhka la leh dabeecadda rasmiga ah ee tartanka.
Wareegga labaad qofka ugu farshaxansan, dhinaca qoraalka ama sawirka waxa la shaacin doonaa 5 cisho ka hor xafladda xidhitaanka 16 ka cisho ee ololaha ka dhanka ah tacaddiyada jinsiga ku salaysan.
Habeenkaxidhitaankawaxa la soo bandhigidoonaaguulaystahaiyowixiiuukugulaystaysheekoamafarshaxan.
Ka hor, intaan la shaacin guulaystaha, waxa laqaban doonaa, xaflad kooban oo lagu soo bandhigi doono saddexda qof ee tartanka ugu sareeeya si loo aqoonsado dadkii dedaalka ka sameeyay ee aan noqon qofkii koowaad, islamarkaasna farriintii wacyigalinta loo gudbiyo.
Guulaystaha koowaad, ee sheekadiisu ama farshaxankiisu ugu tayada wanaagsanaado, waxa la siin doonaa dhiirigalin qadar lacageed ah.
Labada qof ee ugu wanaagsan ee ku soo xiga guulaystaha koowaad waa la aqoonsan doonaa, iyada oo la siinaayo shahaado sharaf.
1303 total views, 8 today